FITANTANANA ENY IFOTONY : Hofanin’ny Enam ireo lehiben’ny Fokontany eto Antananarivo
Tsy afa-misaraka amin’ny fampandrosoana ny firenena ny fisian’ireo lehiben’ny Fokontany. Izy ireo no mahalala indrindra ny eny ifotony. 31 juillet 2019
Manoloana izany indrindra no hampitomboana ny fahaiza-manaon’izy ireo eo amin’ny fitantanana ny Fokontany izay hiadidiany. Hisitraka fampiofanana avy amin’ny sekoly manofana ho mpiasam-panjakana ambony (Enam) ireo sefo Fokontany, fiaraha-miasa miaraka amin’ireo tanora mpitarika nahazo vatsim-pianarana tao amin’ny masoivohon’i Etazonia. Ireo lehiben’ny Fokontany eto an-drenivohitra aloha no hahazo izany amin’ity andiany voalohany ity, ezahina kosa ny hanaparitaka izany manerana ny Nosy.
Ho fampandrosoana ny firenena no tanjona ao anatin’ity fampiofanana ity. Araka ny fanazavana noentin’ ny tale jeneralin’ny Enam fa tafiditra ao anatin’ny fampiroboroboana ny fanapariaham-pahefana izao fampiofanana ny sefo Fokontany omen’ny sekoly ambony Enam izao. “Rehefa manao fanapariaham-pahefana dia tsara raha ireo tompon’andraikitra eny ifotony mba omena fiofanana. Ny eritreritra amin’izao dingana voalohany izao dia hanamafy ny fahaizamanaon’ireo mpitantana Fokontany ireo”, hoy ny fanazavana voaray. Fantatra fa tsy fampiofanana amin’ny tontolon’ny fitantanan-draharaham-panjakana ho an’ireo nahavita fianarana ambony ihany no omen’ity sekoly ambony ity fa hipaka hatrany amin’ny vahoaka ihany koa.